Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou C&W Precision Tools Co.,Ltd
Ndị ọrụ sọpụrụ
Ntinye ndenye na-abụghị ọkọlọtọ
Ntinye na-emepe emepe
Ntinye igwe ihe
Ihe ntinye ihe eji egwu egwu egwu
Ihe ntinye eriri
Ụlọ ọrụ ọhụrụ
Album foto onye ọrụ
Zhuzhou C&W Precious Tools Co., Ltd, anyị nwere ọtụtụ akụkọ ọhụrụ na-atọ ụtọ ma na-atụ anya ịgụ akwụkwọ gị.
Anyị nwere akụrụngwa kachasị elu, anyị nwekwara ike ịsọ mpi na ndị otu mba ụwa
Anyị na-elekwasị anya na njikwa ọrụ ndị ahịa, nyefee ndị ahịa atụmatụ ọrụ mbụ, ma nwee usoro ọrụ doro anya
Ngwa mgbakwunye Tungsten Carbide
Ntinye nkewa nke mpụga
Ntinye oghere oghere igwe
Ihe ntinye nke Radius Deburring Mil
Ihe ntinye PCD na-arụ ọrụ osisi
Spiral Flute Milling Ntinye
Spiral Rotor Milling Inserts
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Zhuzhou C&W Precious Tools Co.,Ltd
Zhuzhou C&W Precision Tools Co., Ltd (C&W Tools) dị na ntọala ụlọ ọrụ carbide China --- Zhuzhou. Na afọ nke indexiable ntinye R&D、n'ichepụta na ahụmahụ ngwa, ụlọ ọrụ abụrụla onye ọkachamara zuru oke ndị na-eweta ihe ngwọta n'ọhịa nke igwe, anyị nwere ngwá ọrụ pụrụ iche siri ike ọrụ imewe na ike nrụpụta, tumadi maka ntinye ahaziri na ngwaahịa carbide wdg. ※ Ngwa & Ngwa nyocha The ụlọ ọrụ nwere a zuru set nke mbụ klas nhazi equipments na inspecting ngwá gụnyere CNC mpụta egweri egweri, ise-axis tooling grinders, Image nha ngwá, Electric ịpị igwe...
Carbide ngwá ọrụ na-abụghị ọkọlọtọ
T-slot egwe ọka cutter, "Carbide na-abụghị ọkọlọtọ ngwá ọrụ": Ọ na-eji elu-ọsọ ígwè na ike alloy hazie general mfe ịcha metal (HRC30 ma ọ bụ n'okpuru), na ike mere nke elu-ọsọ ígwè.
Nkà na ụzụ ịkpụ ígwè na ọkwa mmepe ngwá ọrụ
Kemgbe etiti narị afọ nke 20, n'ihi mmezu dị mma nke sayensị na teknụzụ dị ka microelectronics, teknụzụ ozi, na sayensị ihe, yana mmụba nke ọganihu injinia, nkwalite ngwa ngwa nke nrụpụta na teknụzụ n
Iji teknụzụ ESC kwalite ịdịte aka nke eriri carbide cemented
Usoro ESC (Edge na Surface conditioning) bụ usoro maka nkwalite (passivation) na polishing elu nke mbepụ. Site na usoro ESC, a na-eme ka ike njedebe ngwá ọrụ dịkwuo mma, ọnọdụ nrụgide dị elu na-eme ka
Tinye : Lide Industry Park, No.78 Huanghe South Road, Tianyuan Mpaghara, Zhuzhou City, Hunan Province, China 412007
Ekwentị : 0086+15207335549
Njem ụlọ ọrụ
© Nwebiisinka © Zhuzhou C&W Precious Tools Co., Ltd Ikike niile echekwabara.
pịa ka ị gwa m okwu